Home News Kooxo Burcad oo lagu qabtay Muqdisho
Ciidamada Booliska degmada ayaa gacanta ku dhigay Rag hubaysan oo sida la sheegay dhac u gaysan jiray dadka shacabka ah ee ku nool Xaafadaha Degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Ragga la soo qabtay oo watay Mooto Bajaaj, ayaa waxa ay ahaayeen laba ruux oo sida la sheegay watay Bistoolado, kuwaasi oo la dagaalamay ciidamada Booliska intii lagu guda jiray hawlgalka lagu soo qabanaayay.
Saraakiisha Booliska Degmadaasi ayaa xaqiijiyay in xaafad ka mid ah Degmada Kaaraan, laga soo qabtay ragga hubaysan xilli ay isku dayayeen inay ka baxsadaan Booliska.
Dadka shacabka ah ee ku nool Degmada Yaaqshiid ayaa maalmihii dambe dareemaayay xaalad amnidaro, kadib burcadda dhaca u gaysanayasa shacabka oo taleefoonada ka qaadata.
Previous articleMW. Farmaajo oo ku wajahan Imaaraadka, xiriirka Qatar iyo Turkiga oo gabaabsi ah. (Xog Dheeri ah)
Next articleWasiir si diiran loogu soo dhaweeyay Buula-burde
Taliska Booliska oo ka hadlay Dhimashada Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali Seed!!